Ny androaniko | Fizahantany
[Fizahantany ] 12 Janoary, 2018 13:54
Ny fantsakan'i Masindahy Patrisy ao Orvieto.
Ao afovoany andrefan'i Italia, ao Orvieto, no mba itondrako kely anareo amin'ity blaogy ity, hampahafantatra lava-drano fantsakana iray : ny "Lava-dranon'i Masindahy Patrisy". Tsy misy idirany amin'ity olomasina irlandezy ity ny anarany fa angamba nalaina tamin'ny tantarany, izay nanokana toerana fisintahana sy fivavahana tany ambanin'ny tany tamin'ny antsasaky ny taonjato faha-18 tany. "Lavadranon'ny manda" no tena anarany tany am-boalohany noho izy tsy lavitra an'i Rocca Albornoz, izay tanàna misy manda fiarovana.
Tamin'ny taona 1527 no natomboka ny fanorenana azy, ary efa ny taona 1537 vao vita. Izy ity dia isan'ny hahitana taratra ny fahaiza-manaon'ireo italianina amin'ny sehatry ny asa vaventy izay mampalaza azy ireo tokoa (làlana, tetezana, tao-trano). Raha ny fantsakana mahazatra manko dia asiana tady ny siny fanovozana dia iny no alatsaka any ambany any dia sintonina miakatra avy eo, fa ity kosa dia misy tohatra roa miolikolika - ny iray natao hidinana ary ny iray natao hiakarana, mba tsy hampifanjevo ny mpantsaka. Ampondra no nentina nantsaka tamin'izany satria 54 metatra ny halalan'ilay lava-drano ka tsy mora ho an'ny olombelona ny hiakatra ireo zana-tohatra 248 miaraka amin'ny siny feno rano (fa azo atao ihany raha te hanabokona aloha e).